यो एक कारणले गर्दा सुष्मिता सेनले ऐश्वर्या रायलाई पछाडी पार्दै मिस यूनिभर्सको ताज जितेकी थिइन्, जसको भिडियो भयो भाइरल [भिडियो सहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»यो एक कारणले गर्दा सुष्मिता सेनले ऐश्वर्या रायलाई पछाडी पार्दै मिस यूनिभर्सको ताज जितेकी थिइन्, जसको भिडियो भयो भाइरल [भिडियो सहित]
यो एक कारणले गर्दा सुष्मिता सेनले ऐश्वर्या रायलाई पछाडी पार्दै मिस यूनिभर्सको ताज जितेकी थिइन्, जसको भिडियो भयो भाइरल [भिडियो सहित]
By पूजा बानियाँ on ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:४० हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी। अहिले सुष्मिता सेनले मिस यूनिवर्सको ताज जितेको २४ वर्ष पुरा भइसकेको छ। १९९४मा पहिलो पटक भारतको नाममा मिस यूनिभर्सको ताज जित्ने नै सुष्मिता सेन थिइन्। मिस यूनिवर्सको ताज जित्नको लागि सुष्मितालाई निकै संघर्ष गर्नुपर्यो।
१९९४ मा सुष्मिता सेन र ऐश्वर्या राय दुवैले मिस इंडिया पेगमेंटमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त कम्पिटिसन गोवामा भएको थियो। दुवै उत्तिकै सुन्दरी र बुद्धिमान भएकाले कम्पिटिसन यसैले जित्ने पक्का छ भन्ने कुरा कसैले पनि अड्कल गर्न सकेका थिएनन्।
सुष्मिता सेन मिस यूनिभर्स हुँदा सुष्मिताले ऐश्वर्यासँग कसरी ताज छिनेकी थिईन् भन्ने कुराको जानकारी सायद कमैलाई होला। अनितिम चरणमा पुग्दा पुग्दै सुष्मिता र ऐश्वर्या बीच टाई भएको थियो।
अन्तिम चरणमा जजले दुबैलाई ९.३३ नम्बर दिएका थिए। दुवै बीच टाई भएपछि दुवैलाई एक प्रश्न सोधिने र जसले उत्कृष्ट उत्तर दिन्छ उसैलाई मिस यूनिभर्सको ताज पहिराउने निर्णय भयो।
सर्वप्रथम जजले ऐश्वर्यासँग प्रश्न सोधे। प्रश्न यस्तो थियो, ‘तपाई तपाईको श्रीमान कस्तो गुण भएको चाहानुहुन्छ ? रिज फरेस्टर को जस्तो बोल्ड याण्ड ब्यूटिफुल कि मैसन कैपवेल को जस्तो?’ रिज फरेस्टर र मैसन कैपवेल दुवै हलीवुड सिरीजको क्यारेक्टरको नाम हो।
उत्तरमा ऐश्वर्याले भनिन्, ‘मैसनजस्तो किनकि हामी दुवैमा उस्तै खालो गुण छ। मैसन एकदम केयरिंग छ र उनको सेन्स अफ ह्युमर पनि राम्रो छ। जुन मसंग एकदम मेल खान्छ।
जजले ऐश्वर्यासँग प्रश्न सोधेपछि सुष्मितालाई प्रश्न सोधे। प्रश्न यस्तो थियो , ‘तपाईलाई तपाईको देशको टेक्सटाइल हेरिटेजको बारेमा के जानकारी छ ? यो कहिले देखि शुरु भएको थियो ? र तपाईलाई लगाउन मन छ।’
यो प्रश्नको जवाफ दिएर सुष्मिताले मिस यूनिवर्सको ताज हात पारेकी थिईन। उनले उत्तरमा भनेकी थिइन्, ‘ मलाई लाग्छ कि यो महात्मा गांधीको समय देखि शुरु भएको थियो। मलाई इंडियन र एथनिक पहिरन लगाउन एकदम मन पर्छ । म आफ्नो वार्डरोबमा इंडियन पहिरन राख्न रुचाउछु ।’